Talyaaniga oo muqdisho ka furtay xarun LAGA MASAAFURIYO AL-SHABAABKA |
Talyaaniga oo muqdisho ka furtay xarun LAGA MASAAFURIYO AL-SHABAABKA
where can i buy nolvadex online, order lioresal. Ilo-Xog-Ogaal ka tirsan Dowlada Federaalka Somalia, ayaa inoo xaqiijiyay in Dowlada Talyaniga ay Magaalada Muqdisho ka furtay xarumo laga safriyo shaqsiyaadka looga shakiyo kamid ahaan shaha Kooxaha Xagjirka ah ee Alshabaab.
Xarunta ayaa waxaa la sheegayaa inay ku xiran tahay xarumaha Argagixiso la dirirka Talyaaniga ee ku yaalla Magaalada roma, iyadoona shaqsiyaadkaasi si toos ah loogu gudbinaayo xarumaha dalkaasi.
Wararku waxa ay sheegayaan in DF Somalia ay arrintaasi garab adag ku siisay Talyaaniga, waxaana la Tilmaamayaa in Howshaasi badi lagu maja-xaabinaayo Culimada Soomaalida kuwooda madaxa-banaan iyo kuwa ka tirsan Ururdiimeedyada sida Alshabaab.
Dhanka kale, Arrintaani ayaa imaaneysa iyadoo DF Somalia ay wax waliba Ogolaansho u siineyso Dowladaha shisheeye ee faragalinta ku haaya Arrimaha Somalia, waxaana arrintaani walaac adag ka muujinaaya Culimada Soomaaliyeed.